Story | ဒီပကျော်(နည်းပညာ) | Page 2
( ဖြစ်ရပ်မှန် )
မနေ့က ကျနော် facebook ထိုင်ကြည့်ရင်း စာဝင်လာသံကြားရတော့ ဖွင့်ကြည့်မိလေသည် …။ စာက မိတ်ဆက်စာ…။ ညီလေးတစ်ယောက်မှ အခုလို မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာ ဝမ်းသာကြောင်း ၊ ရေးတဲ့စာများကို ဖတ်ရှုရကြောင်း ၊
အမြဲအားပေးနေကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောလာသည်ကို တွေ့
ရပါသည် …။ ကျနော်ကလည်း ထပ်တူဝမ်းသာကြောင်း ပြန်
ပြောရင်း ညီလေးက သူ့အတွေ့အကြုံ တစ်ချို့နဲ့ သူသိချင်သည်
များကို မေးမြန်းလာပါသည်…။ သရဲ တစ္ဆေ စတဲ့ ဂမ္ဘီရအကြောင်း ရေးသားသူဆိုတော့ အခုလို လာရောက်မေးမြန်း
သို့သော်…ညီလေး မေးမြန်းတာက စိတ်ဝင်စားစဖွယ် ဖြစ်နေ
ပါသည်…။ သူက တစ်ခါ သရဲအခြောက်မခံဘူးကြောင်း ၊ အခု
ထိလည်း မမြင်ဘူးသေးကြောင်း ၊ သို့သော်…မှင်စာကိုတော့
ကိုယ်တွေ့ ကြုံ ဘူးကြောင်း ပြောပါသည်…။ မှင်စာ ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ…သူကြုံတွေ့ဘူးတဲ့ မှင်စာက စာမှာ ဖတ်ဘူးသလို
မဟုတ်ကြောင်း ၊ ဘာကြောင့် မတူရသလဲ…စသည်ဖြင့် မေး
မြန်းပါသည်…။ ဘယ်လို ကြုံတွေ့ဘူးသလဲ…ဆိုပြီး ကျနော်က
မေးမြန်းကြည့်လိုက်တော့ သူကိုယ်တွေ့ ကြုံ ခဲ့ဘူးတဲ့ မှင်စာ
” အစ်ကို စိတ်ဝင်စားလား…စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ကျနော်
သို့နှင့် ညီလေးက သူ့အတွေ့အကြုံ ကို အောက်ပါအတိုင်း
ုပြန်လည် ပြောပြပါသည်…။ သူ့အတွေ့အကြုံကို ကျနော် ဆီ
ကျနော့်နာမည် နိုင်လင်းဦး…။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကျနော့်ကို ဒိုကြီးလို့ပဲ ခေါ်ကြတယ်…။ ကျနော့်အလုပ်က လမ်းဖောက် dozer စက်ကြီးကို မောင်းနေတော့ အလွယ်ခေါ်ကြ
အခုဖြစ်ရပ်က 2003- 2004 ခုနှစ်မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာ…။
အဲဒီတုန်းက ကျနော် ပဲခူးရိုးမ ၊ အုတ်တွင်းအနောက်ဘက်မှာ
သစ်ထုတ်စခန်းမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်…။ အခုတော့ အနား
ကျနော်အပါအဝင် လူအတော်များများက သရဲတစ္ဆေအကြောင်း ကြားဘူးကြပေမယ့် မကြုံ တွေ့ဘူးကြလို့ ယုံကြည်ပါ
တယ်…။ အခုထိလည်း သရဲတစ္ဆေ မကြုံ ဘူးသေးပါဘူးဗျာ..။
သရဲတစ္ဆေ မကြုံ တွေ့ဘူးပေမယ့် မှင်စာကိုတော့ တကယ်
လက်တွေ့ကြုံ ဘူးတယ်ဗျ…။ သရဲပေတ လောကမှာ မြန်မာ
အခေါ်အဝေါ်တွေက အများသား…။ သရဲ ၊ တစ္ဆေ ၊ ဘုတ်(ဖုတ်) ၊ ပြိတ္တာ ၊ ဘီလူး ၊ သဘက် ၊ မှင်စာ ၊ ကျတ် စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ
…။ အခု ပြောပြမှာက မှင်စာ အကြောင်းပါ …။
ကျနော်ဖတ်ဘူးသမျှ စာအုပ်တွေနဲ့ ပြောရရင် မှင်စာက သရဲတစ္ဆေ မျိုးနွယ်ဝင်ပါပဲ…။ မှင်စာ အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်မျိုးရှိ
မှန်း ကျနော်မသိပါဘူး…။ ကလေးသရဲကို မှင်စာလို့ ခေါ်ကြတာတော့ သိတယ် …။ မှင်စာ ၊ သရဲ တစ္ဆေ ၊ သဘက်၊
ဘီလူး ဆိုပြီး အစဉ်လိုက် သက်တမ်းရင့်ရင် ရင့်သလို ပြောင်း
ဒါပေမယ့် စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားတာတွေက မှင်စာဆိုတာ က လူပုံစံလို အကောင်သေးသေး ၊ မျက်လုံးပြူးပြူး၊ နားရွက်ချွန်ကားကား လို့ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်…။
လူကို ဒုက္ခမပေးပေမယ့် စတတ် ၊ နောက်တတ်ကြတယ်လို့ ကြားဘူးတယ်…။များသောအားဖြင့် ညောင်ညို ပင်ကြီးတွေ ၊ ကုက္ကို ပင်ကြီးတွေမှာ နေထိုင်တတ်ကြောင်း သိရပါတယ်…။
တစ်ခါတစ်လေ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲ လှေစီး ငါးဖမ်းထွက်
ကြတဲ့ တံငါသယ်တွေလည်း သူတို့လှေထဲမှာ မှင်စာလေးတွေကို တွေ့တတ်တယ်လို့ ကြားဘူးတယ်…။ကျနော်ကြုံတွေ့ဘူးတဲ့ မှင်စာကျတော့ အဲဒီလို ပုံစံမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ…။
2003-2004 ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ ကျနော် ပဲခူးရိုးမ ၊ အုတ်တွင်း အနောက်ဘက် သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စခန်းမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့
တယ်…။ အခုဖြစ်ရပ်က သစ်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်း လုပ်ကွက်
(1.11) အရိုးတောင်မှာ ကြုံ တွေ့ခဲ့တာပါ…။
ကျနော်တို့ သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စခန်းမှာ သစ်ထုတ်တဲ့ စခန်းကြီး ၊ စက်ကြီးစခန်း ၊ ဆင်စခန်းများဆိုပြီး သူ့စခန်းနဲ့သူ အလုပ်လုပ်ကြတယ်…။ ကျနော်ကတော့ စက်ကြီးခန်းမှာ အလုပ်လုပ်တယ်…။
အဲဒီညမှာ ကျနော်တို့ ညမိုးချုပ်ခါနီးအချိန် အလုပ်နားပြီးတာနဲ့ အမောပြေဆိုပြီး အရက်ထိုင်သောက်ကြတယ်…။ အရက်သောက်ပြီးတာနဲ့ ချက်ပြုတ်စားဖို့သောက်ဖို့ဆိုပြီး ရိက္ခာကြည့်လိုက်တော့ ရိက္ခာပြတ်နေတာ တွေ့ရတယ်…။ မစားမသောက်နဲ့ အငတ်ခံလို့လည်း မဖြစ်ဘူး…။
ရိုးမတောမှာက မိုးချုပ်ခါနီးအချိန်ရောက်တာနဲ့ မှောင်နေပြီ…။ စားဖို့သောက်ဖို့အတွက် ရိက္ခာက မသွားယူလို့လည်း မဖြစ်ဘူး…။
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ဆင်စခန်းမှာ ရိက္ခာသွားယူဖို့ဆိုပြီး စက်ကြီးစခန်းကနေ ထွက်လာလိုက်တယ်…။ ကျနော်တို့ စက်ကြီးစခန်းနဲ့ ဆင်စခန်းက သုံးမိုင်လောက်ဝေးတယ်…။ အဲဒီ
လမ်းခရီးက ဒေသခံကရင်တွေက ကြမ်းတယ်လို့လည်း ပြော
ကြတယ်…။ ကျနော်က တော်ရုံ အယုံအကြည်ရှိတဲ့သူမဟုတ်
ဘူးလေ…။ လက်တွေ့ကျကျ စမ်းသပ်မှ ယုံတတ်တယ်…။ သူတို့က ကြမ်းတယ်လို့ ပြောတာနဲ့ ကျနော်က ကြောက်ရမှာ
လားဗျာ…။ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း လိုရမယ်ရ လမ်းခရီးမှာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီး တူမီးသေနတ်နဲ့ ခါးမှာဆောင်ထားတဲ့ ဓားကို လွယ်ပြီး ဆင်စခန်းကို ထွက်လာခဲ့တယ်…။
ညမှောင်နေပြီ…။ အဲဒီည လ ကလည်း သာနေတယ်…။
အဲဒီလိုနဲ့ဗျာ…။ ကျနော် ဆင်စခန်းကို ထွက်လာရင်း
ဆင်စခန်းရောက်ခါနီးအလို သစ်ပုံကြီးဘေး တစ်နေရာမှာ
ရောက်လာတော့ ကြောင်ကြီးတစ်ကောင်ကို တွေ့မြင်လိုက်တယ်…။ ခန္ဓာကိုယ်က ခွေးလောက်နီးပါး ထွားကြိုင်းနေတယ်
…။ အမွေးအရောင်က အဖြူ အနီ အကြားနဲ့ဗျ …။ ညမှောင်နေ
တော့ သိပ်မသဲကွဲဘူး…။ လူက မူးနေတာလည်း ပါတာပေါ့..။
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း အဲဒီအကောင်ကို မြင်လည်း မြင်ရော..။
ဟုတ်ပြီ…ဆိုပြီးပါလာတဲ့ တူမီးသေနတ်နဲ့ ‘ဒိုင်း ‘ခနဲ ဆော်ထည့်လိုက်တယ် ။မထိဘူးဗျ …။ ရှောင်လိုက်တာ လှစ်ခနဲပဲ…။ အတော်မြန်တယ်…။ ဒါပေမယ့်…..ဒီကောင်က ကျနော် ဒီလောက် တူမီးသေနတ်နဲ့ပစ်တာ လုံးဝမပြေးဘူး…။
လှစ်ခနဲ ရှောင်ပြီး မလှမ်းမကမ်းမှာ ရပ်နေတယ်…။ သာမန် တိရိစ္ဆာန်သတ္တဝါကြောင်တစ်ကောင်ဆို ဘယ်နေမလဲ…။ ကျနော်လည်း နောက်ထပ်’ ဒိုင်း’ခနဲ ထပ်ပစ်လိုက်တယ်…။ ထပ်ရှောင်ပြီး ရပ်ကြည့်နေပြန်တယ်…။
ဟာ…ဒီလောက် ဖြစ်တဲ့ကောင်ကွာ ဆိုပြီး တစ်ဒိုင်းဒိုင်းနဲ့
ထပ်ဆော်လိုက်တယ်…။ သကောင့်သားလည်း ရှောင်လိုက်တာ လှစ်ခနဲ လှစ်ခနဲပဲ…။ ပြေးလည်း မပြေးဘူး…။ လူကို ပြောင်ပြနေသလို ဖြစ်နေတယ်…။မြန်တာတော့ အတော်မြန်
နောက်ဆုံး ကျနော့် တူမီးသေနတ် ယမ်းကုန်သွားတဲ့အထိပဲဗျ…။ ယမ်းကုန်တော့ လူက အတော်ကြီးကို စိတ်တိုနေပြီ…။ ဒါနဲ့ သေနတ်မရှိတော့ ခါးမှာ ပါလာတဲ့ ဓားနဲ့ အဲဒီအကောင်ကို လိုက်ခုတ်နေလိုက်တယ်…။ ဒီကောင်က တကယ့်ကောင်ဗျာ…။ ကျနော့်ဓားချက်ကို လှစ်ခနဲ လှစ်ခနဲ ရှောင်ပြီး ပတ်ပြေးနေတယ်…။ ဝေးဝေးလည်း မပြေးဘူးဗျ …။ လူကို ပြောင်ပြနေသလို ဟိုနားပတ်ပြေး ၊ ဒီနားပတ်ပြေးနဲ့…။
သူအဲဒီလိုလုပ်ပြလေလေ ကျနော်စိတ်မရိုးမရွဖြစ်လေလေပဲ…။ စိတ်တိုတာ မကတော့ဘူး…။ အသေရရ အရှင်ရရ
ဆိုပြီး ကျနော်အဲဒီအကောင်နောက်ကို သဲကြီးမဲကြီး လိုက်နေ
ကြာတော့ ဒီကောင်ပတ်ပြေးရင်းနဲ့ သစ်ပုံကြားတစ်ခုမှာ
ဝင်ပြေးလိုက်တယ်…။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီသစ်ပုံကြီးက ရှေ့မှာ
ဆက်တိုးလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်…။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က အထဲဝင်နေပြီး ခြေထောက်နှစ်ခုက အပြင်မှာ ပေါ်နေတယ်…။
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ‘မင်း ဘယ်ပြေးမလဲ ‘ဆိုပြီး သူ့ခြေထောက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်…။ သူက အတင်းရုန်းတာ
ပေါ့…။ တော်ရုံနဲ့ ဆွဲထုတ်လို့ မရဘူး…။
အဲဒီ အချိန်မှာပဲ ဆင်စခန်းက ဆင်ထိန်းတွေ ရောက်လာပြီး ” ဒိုကြီး…လွတ်လိုက်…လွတ်လိုက်…”ဆိုပြီး အတင်း
ကျနော်ကလည်း စိတ်တိုတိုနဲ့ လိုက်ဖမ်းနေရတဲ့သူဆိုတော့ “ဟာ…ဘာလို့ လွတ်ရမှာလဲဟ…ဒီမှာ ကြောင်ကြီးတစ်
ကောင် မိနေပြီ…ဝိုင်းကူဆွဲထုတ်ကြဦး…”ဆိုပြီး ပြန်ပြောလိုက်တယ်…။
မှင်စာ…မှင်စာ…..မင်း သူ့ကို သတ်ရင် မင်းလည်း သေလိမ့်မယ်…မင်း သူ့မျက်နှာကို အသေအချာကြည့်…”ဆိုပြီး အော်
ဒါနဲ့ သူတို့တွေ ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ အဲဒီအကောင်ကို
ရအောင် ဆွဲထုတ်ပြီး လရောင်အောက်မှာ အသေအချာ ကြည့်လိုက်တော့… လား…လား…။အခုမှ အဲဒီအကောင်မျက်နှာကို အသေအချာမြင်ရတော့ ကျနော်မှာ ကြက်သီးဖျန်းဖျန်းထပြီး တကယ်ကိုလန့်သွားတယ်…။ အမူးတွေ ပြေပြီး ဘာဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူးဗျာ…။
အဲဒီအကောင်က လူမျက်နှာနဲ့ဗျ …။ ခန္ဓာကိုယ်က ခွေးခန္ဓာကိုယ်…။ ခြေထောက်က နွားခြေထောက်နဲ့…။ အခုမှ
အသေအချာ ကြည့်မိတယ်…။ ရုတ်တရက် ကြောင်ကြီးတစ်
ကောင်လို့ ထင်ရပေမယ့် ကြောင်ကြီးမဟုတ်ပဲ ဆင်ထိန်းတွေ
ပြောသလို မှင်စာ ဖြစ်နေတယ်…။ တကယ့်ကို ထူးဆန်းတဲ့ သတ္တဝါတစ်မျိုးပဲဗျာ…။ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ကျနော်တစ်ခါမှ မမြင်ဘူး ၊ မတွေ့ဘူး ၊ မကြုံဘူးတဲ့ သတ္တဝါ…။ ရှိတယ်လို့တောင် မထင်တဲ့ သတ္တဝါတစ်မျိုးပါ…။ တကယ့်ကို အံ့သြစရာ
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ပြန်လွတ်လိုက်တော့ ကျနော့်ရှေ့ကနေ
လှစ်ခနဲ သစ်ပုံကြီးဘေးကနေ တောထဲ ဝင်ပြေးသွားတယ်…။
ဆင်ထိန်းတွေ ပြောတော့မှ မှင်စာဆိုတာ ဒီလိုသတ္တဝါမျိုးပါလား ဆိုပြီး သိလိုက်ရတယ်ဗျာ…။ သူ့ကို သတ်လို့မရဘူးတဲ့…။ သတ်ရင် သတ်တဲ့သူလည်း မကြာခင်မှာပဲ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သေသွားကြရတယ်တဲ့ဗျာ…။ အဲဒါပါပဲ…။ ကျနော်ကြုံတွေ့ဘူး
တဲ့ မှင်စာက…။ အဲဒီည ဖြစ်ရပ်ကို ကျနော် လုံးဝ မေ့လို့မရဘူး
“အဲဒီ အဖြစ်က ဖြစ်ရပ်မှန်လား …”
“ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ့ အစ်ကိုရ…ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကြုံ တွေ့ရတာပါ…”
“မယုံတဲ့သူဆိုရင် ကျနော်ဆီကို ကိုယ်တိုင်လာမေးလို့
097842732(- )…အဲဒီဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်လိုက်ပါ အစ်ကို ”
“အမြဲအားပေးလျှက်ပါ…စာရေးဆရာတွေ မှန်သမျှ လေးစားပါတယ်….”
အထက်ပါ အကြောင်းအရာကို ကျနော့် facebook chat
box ကနေ ညီလေး ဒိုကြီးခေါ် နိုင်လင်းဦးကနေ လာရောက်
ပြောပြခြင်း ဖြစ်၏ …။
သည်ဖြစ်ရပ်က မဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိချေ …။ တစ်လောကမှ facebook ပေါ်တွင် မျက်လုံးတစ်လုံးသာ ပါလာပြီး
မွေဖွားလာသော ကလေးငယ် ။ နိုင်ငံခြား ကားလမ်းဘေးတွင် အမည်မသိ လူလိုလို ၊ လိပ်လိုလို ၊ ဖွတ်လိုလို
သတ္တဝါ …စသည်ဖြင့် ကျနော်တို့ လူလောကတွင် ဆန်းကြယ်
သော သတ္တဝါမျိုးစုံ ရှိနေကြပါသည်…။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဒေသနာတော်တွင်လည်း ဆန်းကြယ်သော ကံတရားကြောင့် ဘဝခန္ဓာထူးဆန်းထွေပြားစွာ ရရှိလာကြ
သော မြင်အပ် ၊ မမြင်အပ်သော သတ္တဝါမျိုးစုံအကြောင်း ရှိနေ
ပါသည်…။ မြင်အပ်သော သတ္တဝါထက် မမြင်အပ်သော သတ္တဝါတွေ မျိုးစုံရှိကြောင်းလည်း ပေတဝတ္ထု များတွင် ဖတ်ရှု
လေ့လာရပါသည်…။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဝက်ခေါင်းပြိတ္တာများ ၊
မြွေခန္ဓာကိုယ်နှင့် လူပြိတ္တာများ ၊ စသည်ဖြင့် မျိုးစုံရှိနေကြလေ
သည် …။ မှင်စာ ဆိုတာကလည်း ပေတမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး
ကံတရားအလျောက် ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံ မျိုးစုံရှိနေကြ
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားသဘောအရ ဤသို့ ဘဝခန္ဓာရရှိလာနေ
ကြသည်မှာ အတိတ်ဘဝမှ ပြုစုပျိုးထောင်သော ကာယကံ ၊
ဝစီကံ ၊ မနောကံ တည်းဟူသော ကံတရား၏ အကျိုးပေး ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့် ဖြစ်နေရကြောင်း မှတ်သားရဘူးပါ
သည်…။့ကံ ၊ ကံ၏ အကျိုးပေးမှုကြောင့် သံသရာ
အထပ်ထပ် ကျင်လည် ၊ ဘဝခန္ဓာတွေ မျိုးစုံရရှိ ခံစားနေရ့ပြီး ကံတရားကြောင့် သံသရာလည်မဆုံး ဖြစ်နေရကြလေသည် …။ ကံတရား၏ အဆုံးသတ်ရေးမှာ ထက်မြက်သောဝိပဿ နာလမ်းစဉ်မှလွဲ၍ တစ်ခြားလမ်းစဉ်ဟူ၍ မရှိပါချေ …။အကြောင်းကံတရားရှိနေသေးသ၍ အကျိုးခန္ဓာ ရရှိနေကြဦးမည်သာ ဖြစ်နေကြတော့၏ …။ပုထုဇဉ် ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါများသည် အကြောင်းကံတရားတည်းဟူသော ပြဿ နာရင်းအမြစ်ကို အသေမသတ်နိုင်သေးသမျှ
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်၍ အကျိုးပေးချိန်ကြုံတွေ့ရပါက ဤသို့
သော ဘဝခန္ဓာမျိုး မရရှိနိုင်ဟု အာမခံချက် မရှိကြချေ …။
ကံတရား၏ ဆန်းကြယ်မှု ၊ လောကကြီး၏ ဆန်းကြယ်မှုကား
သာမန်ဉာဏ်အမြင်ဖြင့် မည်သို့ ကြံစည်စိတ်ကူး၍ ရနိုင်ပါမည်
( ပြီး )
Credit’ ဆရာ မင်းကံစည်ဝင်း
*****သင်္ကန်းမကြောက်သော တစ္ဆေနဲ့ တစ္ဆေမကြောက်သော ကိုရင်ပဏ္ဍိ*****
. ကျွန်တော်ကိုရင်စ၀တ်တဲ့အရွယ်က အသက်၁၀နှစ်အရွယ်… ၀တ်တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကျွန်တော်တို့နယ်တစ်ခွင်မှာ နာမည်ကြီး… ဘာနာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ သရဲအရမ်းခြောက်တယ် ဆိုပီး သတင်းမွှေးတယ်… တကယ်လဲ ခြောက်တယ်.. ခြောက်တဲ့သရဲတွေက ကိုရင် ဦးဇင်းတွေတောင်မကြောက်ဘူး… ဘုရားသားတော်တွေတောင် ခြောက်ခံထိတယ်...
ဘုန်းကြီးကျောင်းက ပရိယတ္တိစာသင်ကျောင်းဆိုတော့ စာသင်သားတွေလဲ စုံတယ်… နယ်ပေါင်းစုံက လာတဲ့ကိုရင်တွေ ဦးဇင်းတွေ … များသောအားဖြင့် ပအိုဝ့်တိုင်းရင်းသားတွေပိုများတယ်…. ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အဆောင်၃ဆောင်ရှိတယ်.. အဆောင်၃ဆောင်လုံး သရဲခြောက်တယ်…. ကျွန်တော်ကလဲ ကိုရင်စ၀တ်ခါစဆိုတော့ ညဖက်တွေဆို ရွယ်တူကိုရင်လေးတွေ ရှိတဲ့ အဆောင်မှာ သွားအိပ်တယ်… အဲဒီထဲမှာ ကိုရင်ပဏ္ဍိ ကိုတော့ အခင်ဆုံးပဲ… အသက်က ၁၁နှစ်လောက်ရှိပြီး.. သရဲတစ္ဆေလဲမကြောက်တတ်ဘူး… တစ်ည ကျွန်တော်ကို ..
အဲဒါဆို ဒီညပြမယ် ကြည့်မလားတဲ့….
အဲဒါဆို တပည့်တော် နှိုးတဲ့အခါထကြည့်… အခုတော့ အိပ်တော့ဆိုပြီးပြောတယ်..
နေ့လည်က ကစားထားတော့ မောမောနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်…
ဘယ်လောက်အိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူး.. ကိုရင်ထထထ ခဏနေဒီကောင်တွေ ထွက်လာတော့မယ်..ဆိုပီးနှိုးတော့မှ နိုးလာတယ်..
ပဏ္ဍိ သရဲက ဘယ်ကထွက်လာမှာလဲ…. အခုက ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာလေ… သရဲကအပြင်မှာရှိတာ မဟုတ်ဘူးလား …
ဘယ်ကလာ သရဲက ဒီအဆောင်ထဲမှာရှိတာ.. အောက်ထပ်မှာ ခဏနေထွက်လာတော့မှာ.. လာလာ ဆိုပြီး နှစ်ယောက်သား လှေကားအဆင်းနားကနေ ချောင်းနေတာ… အောက်ထပ်မှာက ကိုရင်ကြီးတွေ အိပ်နေတဲ့ ကုတင်တွေရှိတယ်…
ခဏနေ ပဏ္ဍိက ကိုရင် ဒီကောင်တွေလာပီ သေချာကြည့်….အဲလိုလဲပြောပြီးကော..
လှေကားအောက်ကနေ …ထွက်လာတာဗျာ အများကြီးပဲ….. ဒါပေမယ့် ထင်ထားသလို ကြောက်စရာပုံတွေမဟုတ်ဘူး…
၀က်တွေဗျာ ၀က်တွေ အရွယ်တွေစုံနေတာပဲ… အကောင်သေးသေးကစ အကောင်ကြီးကြီးထိ မရှိဘူးဆို အကောင်၂၀လောက်ရှိမယ်…
လှေကားအောက်ကနေ ပြေးထွက်ပြီး… အဆောင်ဒေါင့်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့ကုတင်အောက်ထဲကို ပြေးဝင်သွားကြတာ…
ကျွန်တော်ဆို အံ့သြလွန်းလို့ စကားတောင်မပြော နိုင်ဘူး…. နောက်တော့ ကိုရင်ပဏ္ဍိကို မေးတာ..
အဲဒီဝက်တွေက ဘာတွေလဲ … ပဏ္ဍိ.
ပြောင်းထားတာ… သူတို့က ညတိုင်းမထွက်ဘူး..လပြည့်နေ့မှ ထွက်တာ…ငါတောင်အပေါ့ထသွားရင်းတွေ့လို့ သိရတာ ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေ မသိသေးဘူး..
ပဏ္ဍိကလဲ အဲဒါက ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူး….
ဒီအဆောင်မှာက ဒီလိုကောင်တွေပဲရှိတယ်… အလယ်ဆောင်မှာဆိုပိုဆိုးတယ်… နောက်နေ့ အဲဒီအဆောင်မှာ သွားအိပ်မယ်… အဲဒီအခါကျမှ လန့်မအော်နဲ့….
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအဆောင်မှာ သရဲတစ်ကောင်ရှိတယ်…. ငါ့ကိုတောင် စရောက်တုန်းက ခြောက်သေးတယ်….အိပ်နေရင် သင်္ကန်းကိုလာလာဆွဲတယ်… နောက်ပီးခြေထောက်လဲ လာလာဆွဲတယ်….. သူဒီမှာရှိကြောင်းပြတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်… နောက်ပိုင်းငါ့ကိုမခြောက်တော့ဘူး…. ကိုရင်အသစ်တွေဆိုရင် အဲဒီအဆောင်မှာ သွားမအိပ်ရဲဘူး…..ဟိုတစ်လောက ကိုရင်အဂ္ဂ အဲဒီအဆောင်မှာအိပ်နေရင်း တီဗီကြည့်နေတာ…
နောက်တီဗီကြည့်နေရင်း… ဖက်ခေါင်းကိုစမ်းမိတာ ဖက်ခေါင်းအုံး မဟုတ်တော့ပဲ လက်ပြတ်ကြီးပေါ်ကို ခေါင်းတင်ပြီး အိပ်နေတာ…. အဂ္ဂတစ်ယောက်အော်ပြီးပြေးတာ.. နောက်နေ့ တွေ အဲဒီအဆောင်ကိုမသွားရဲတော့ဘူး…..
အော်အဲလိုလား….. ဒီညသွားအိပ်မယ်လေ… ပဏ္ဍိ မင်းပါလိုက်ပေး…
အေးပါကွာ ငါလိုက်အိပ်ပေးမယ်…. ခြောက်ခံထိရင် ထွက်မပြေးနဲ့နော်…. ဟဟဟဟ
အဲဒီည ကျွန်တော်ရယ် ပဏ္ဍိရယ်.. အဲဒီအဆောင်မှာနေတဲ့ ဦးဇင်းဆီမှာ တီဗီကြည့်မလို့ဆိုပြီး ခွင့်တောင်းပြီး နေကြကော.. အချိန်နည်းနည်းလင့်တော့ မပြနါတော့ဘူး… ဒီမှာပဲအိပ်တော့မယ်ဆိုပြီးပြောတော့ ဦးဇင်းက ကိုရင်လေးဖြစ်ပါ့မလား.. နေရဲလို့လား..
နေရဲတယ် ဦးဇင်း.. ပဏ္ဍိလဲပါနေတာပဲ… တပည့်တော်ဘာမှလုပ်တာမှမဟုတ်တာ…
ဒါဆိုလဲ အိပ်ကွာ ခြင်ထောင်တော့မရှိဘူး..
ခြင်ဆေးထွန်းအိပ်ဆိုပြီး ပေးအိပ်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ပဏ္ဍိလဲ ဖျာခင်းပြီး အိပ်ကော…
ကျွန်တော်ကတော့ မအိပ်ခင် စိတ်ထဲကနေ… ဒီအဆောင်မှာရှိတဲ့သူက ဘယ်လိုပုံစံလဲမသိဘူး.. မြင်ရရင်ကောင်းမယ်… အဲလိုတွေးပီး..
ပဏ္ဍိငါလက်တို့ရင် ထနော်… အိပ်ပုတ်ကြီးမနေနဲ့…
အေးပါကွာ ငါမအိပ်ပါဘူး…. တစ်ခုခုထူးခြားရင် ခက်ကုတ်လိုက် မင်းဘေးမှာငါရှိနေတာပဲ….
မှေးခနဲဖြစ်တဲ့အချိန်… သင်္ကန်းကိုလာဆွဲသလိုခံစားလိုက်ရတယ်…. မျက်လုံးကမဖွင့်ကြည့်ရဲဘူး….. အဲဒါနဲ့ဘေးက ပဏ္ဍိကို လက်ကုတ်လိုက်တယ်….. ခဏနေတော့ ပဏ္ဍိက သူသိကြောင်း
လက်ပြန်ကုတ်တယ်…ခဏနေတော့ သင်္ကန်းလာပြန်ဆွဲပြန်ရော… သင်္ကန်းကလေထဲမှာလွှင့်နေသလို ခံစားမိတော့.. မျက်လုံးအသာလေးဖွင့်ကြည့်တာ…. တကယ်အဟုတ်ပဲ…. သင်္ကန်းက လေထဲမြောက်နေတာ.. တစ်ယောက်ယောက်ဆွဲနေသလိုပဲ….. အကောင်အထည်တော့မမြင်ရဘူး… ပဏ္ဍိလဲတွေ့တယ်. အဲဒီအချိန် ၀ုနးဆို ပဏ္ဍိ မတ်တပ်ထရပ်ပြီး အဲဒီသင်္ကန်းဘေးကို ပြေးသွားပြီး လက်သီးနဲ့ထိုးနေတာ… ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ ပဏ္ဍိတစ်ယောက်ထဲ ..
ကြမ်းပေါ်မှာလိမ့်နေတာ… ပါးစပ်ကလဲ အော်နေတာ…
မင်းလားကွ ..ဆိုပြီး လေထဲကိုထိုးနေတာ… ခဏကြာတော့ အသံတွေကြားလို့ အပေါ်ထပ်မှာ အိပ်နေတဲ့စာချဆရာတော်ဆင်းလာမှ….. ပဏ္ဍိလဲ အထိုးရပ်လိုက်တယ်…. တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ချွေးတွေ ရွှဲနစ်နေတာပဲ….
ဟဲ့ ပဏ္ဍိ ဘာဖြစ်တာလဲ….
ဘုရား… ဘယိကကောင်လဲမသိဘူး… တပည့်တော့သင်္ကန်းလာဆွဲလို့ ကြည့်လိုက်တာ.. မဲမဲပုပု အကောင်တစ်ကောင် ဖြစ်နေတာ…. တစ်ခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်ဘူး လာလာဆွဲနေတာ..
အဲဒါအဲဒီကောင်က တပည့်တော်ကို ထိုးမလားဆိုပြီး စိန်ခေါ်တာ တပည့်တော်လဲ ဒေါသထွက်ပြီး ထိုးနေတာ.. သူကိုထိုးရတာ ဖွဲအိတ်ကိုထိုးနေရသလိုပဲ… ကြာလာတော့ မောလာတယ်.. သူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး… ဦးဇင်းနိုးလာမှ ဒီကောင် တံခါးဟထားတဲ့ ကြားကနေ ပြေးဆင်းသွားတယ် …..
ကျွန်တော်လဲ ပဏ္ဍိပြောတာကို ပါးစပ်အဟောာင်း သားနဲ့နားထောင်နေတာ.. ကျွန်တော်က ဘာမှကို မတွေ့တာ.. အဲတော့မှ ဦးဇင်းက ဒီကောင် ဘာလာလုပ်ပြန်ပီလဲမသိဘူး… ဦးဇင်း ဒီကောင် အဲလိုလိုက်စနေလို့ မောင်းထုတ်ထားတာ…. အဲဒီကောင်က စနောက်ရတာသဘောကျတယ် ထင်တယ်… ဒီကျောင်းကို ဘယ်သူမှမလာရဲအောင် ကိုစနောက်တော့တာပဲ.
ကဲကဲ ပြန်အိပ်တော့ … ဦးဇင်းလာအိပ်ပေးမယ်…
ဆိုပီး ဦးဇင်းက ကျွန်တော့်ကိုအလယ်မှာထားပြီး လာအိပ်ပေးတယ်… ..
မနက် အာရုဏ်တက်တော့ ပဏ္ဍိက ကိုရင်ထထထ
အာရုဏ်ဆွမ်းကြွရမယ်.. မျက်နှာသစ် .သင်္ကန်းရုံဆိုပြီးလာနှိုးတော့မှာ ကောက်ထပြီး မျက်နှာသစ်.. သင်္ကန်းရုံပြီး အာရုဏ်ဆွမ်းကြွ လိုက်သွားတာ.. ကိုရင်တွေအားလုံးတန်းစီပြီးကြွရတယ်… ကျွန်တော်က ၀ါစဉ်အနည်းဆုံးဆိုတော့ နောက်ဆုံး.. ကျွန်တော်ရှေ့မှာကတော့ ပဏ္ဍိ..
အဲလိုကြွလာတာ အပြန်ကျတော့ အိမ်သာတက်ချင်လာကော…. ကျောင်းကလဲ လမါးတစ်ကွေ့ကျန်သေးတယ်… ဒါပေမယ့် ဘုရားပေါ်ကဖြတ်သွားရင် နီးနီးလေး အဲဒါနဲ့ ပဏ္ဍိကို ခေါ်ပြီး ဘုရားပေါ်ကနေ ဖြတ်တာ… အချိန်က အလင်းရောင် မှုန်မှုန်လေးပဲမြင်နေရသေးတာ…. ဘုရားပေါ်မှာလဲ မှောင်နေတာ… ဘုရားပေါ်ကနေဖြတ်လာတော့…. ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲအ၀င်နားက သရက်ပင်အောက် ရောက်ကော….
ဒီတစ်ခါကျွန်တော်မြင်လိုက်တာ… ပဏ္ဍိ ဟိုမှာ ဘာကောင်လဲ တွေ့လား.. သရက်ပင် အောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ မျောက်လားမသိဘူး….
ပဏ္ဍိက သေချာကြည့်ပြီး ဟာ…ဟိုကောင် ညကကောင်…ငါ့ကိာစောင့်နေတာဖြစ်မယ်….
ရော့ သပိတ်ကိုင်ထား.. ဒီမှာရပ်နေဆိုပြီး ခါးပန်းကြိုးကိုဖြုတ်ပြီး အဲဒီမဲမဲကောင်ကို လိုက်ရိုက်တာ. မဲမဲကောင်က ပထမတော့ ပဏ္ဍိကို ပြန်လုံးတယ်… ဒါပေမယ့် အနားမရောက်ဘူး… ပဏ္ဍိကနေပြီး ခါးပန်းကြိုးနဲ့ ဆီးရိုက်တာ…. ဖြန်းဖြန်းဖြန်း…….
အဲလို၃ချက်လောက်ထိကော ဟိုကောင် ၀င်မလုံး တော့ပဲ …. မြေကြီးမှာလိမ့်နေအောင်အော်နေတာ…
ပဏ္ဍိကလဲ ဘာမှတ်နေလဲ … မှတ်ထား …. အဲဒါဆရာတော် ခါးပန်းကြိုးကွ ဆိုပြီး ပြောလဲပြော ရိုက်လဲရိုက်… ခဏနေတော့… ဟိုမဲမဲကောင်က ထပြေးတာ….. ဘုရားဘေးက ဇရပ်ပျက်အနောက် ထဲကိုဝင်ပြေးသွားတာ….. ခဏနေတော့ ပဏ္ဍိ သပိတ်လာပြန်ယူတော့…. ပဏ္ဍိ မင်းဆရာတော်ခါးပန်းကြိုးဘယ်လိုရလာတာလဲ..
ဟဲဟဲ ဒီကောင် ဒီညထပ်လာရင် ရိုက်မလို့ ဆရာတော် လှမ်းထားတဲ့ ခါးပန်းကြိုးခဏဖြုတ်လာတာ… ဒီကောင်က ညထိမစောင့်ပဲ ပေါ်လာတော့ ခါးပနါးကြိုးစာ ကျွေးလိုက်တာပေါ့……
အဲဒါနဲ့ သပိတ်ကိုယ်စီလွယ်ပြီး ဆွမ်းစားဆောင်ထဲ ၀င်တော့ ဆရာတော် ကြိမ်လုံးကိုင်ပြီးစောင်နေ့တယ်…. လာခဲ့ ၂ကောင်လုံးဆိုပြီး …. ပဏ္ဍိကိုတော့ ခါးပန်းကြိုးကို ပိုင်ရှင်မသိပဲ ယူတာ ခိုးတာပဲဆိုပြီး တရွှမ်းရွှမ်းနဲ့ ဗျင်းတော့တာပဲ…. ကျွန်တော်ကိုတော့ ဒုလ္လဘ မို့လို့ မရိုက်တော့ဘူး…. ခေါင်းကိုပဲ ဒေါက်ကနဲ မြည်အောင် ခေါက်ပြီး… သွား ဆွမ်းသွားစားတော့..
နောက်နေ့ကစပြီး ကျွန်တော်လဲ ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့မှာမို့လို့ လူဝတ်ထွက်လိုက်ရတယ်… ပဏ္ဍိကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျန်ခဲ့တယ်.. ကျွန်တော်လဲ အချိန်ရရင် ရသလို ပဏ္ဍိနဲ့သွားတွေ့ပါတယ်… ပဏ္ဍိလဲ ဓမ္မာစရိယတန်းအထိရောက်ခဲ့တယ်.. နောက်ပိုင်း အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တယ် .. အခုသတင်းကြားတာက လူထွက်ပြီး မိန်းမရနေပီလို့ ကြားတယ်…. ခုထိ ပြန်မတွေ့ရတော့ဘူး….. ဆရာတော်ကတော့ ကျွန်တော် ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း..
မင်းသူငယ်ချင်း ပဏ္ဍိတော့ မိန်းမရသွားပီကွ… မင်းပဲကျန်တော့တယ်လို့ အမြဲပြောတယ်……
အခုရေးတဲ့စာကို တိုက်ဆိုင်လို့ ပဏ္ဍိ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ငါ့ဆီကို ဆက်သွယ်ပေးပါ…..
Credit-ဇယန ( ရာမည )
~~မိုးဦးကျခါစဖြစ်၍ ကျေးရွာများ၌ငါးရစ်ခုတ် ဖားဆန်ကွေးရိုက်တက်ကြလေသည်..
ချောင်းကြီးရွာသား ကိုသိုက်ညနေစောင်ချိန်ရောက် သဖြင့်ငါးရှာရန်ပြင်ဆင်နေလေသည် တို့အချိန်တွင်
ကိုသိုက်သူငယ်ချင်းများဖြင့်ကြသော စိုးကြီးနှင့် အောင်ဘတို့ ရောက်လာကြလေသည်
“ဟေ့ကောင် ကိုသိုက် မင်းပြင်လို့ဆင်လို့ပြီးပြီလား တို့ဒီ ညရွာပြင်ကွင်းမှာ ငါးသွားရှာကြမယ် မင်းလိုက်မှာလား”
“ဟာ ဟေ့ကောင်တေရွာပြင်ကွင်းက သချို င်္င်းကုန်းနဲ့နီးတယ်လေကွာမသွားချင်းပါဘူး ကြောက်တယ်ကွ”
“မင်းကလဲ တစ်ယောက်ထဲမှ မဟုတ်တာငါတို့လဲပါတာပဲကို”
“အေးလေ” စိုးကြီးရဲ့စကားကို အောင်ဘက ထောက်ခံလိုက်လေသည် အဲ့တော့လဲအဖော်ညီတော့ ကိုသိုက်က
“အေးဒါ ဆိုသွားမယ်ကွာ ဘယ်သူမှ မရှာတဲ့နေရာဆိုတော့ ငါးပိုရမှာကွ “”
စကားပြောရင်ညမှောင်လာလေသည် “ဟေ့ကောင် ကိုသိုက်မြန်မြန်လုပ်မှောင်လာပြီကွ တို့ကဒီညငါးမခုတ်တော့ဘူး ပိုက်တားမှာဆိုတော့ တအားညည့်နက် နေရင်မကောင်းဘူးကွ”
ကိုသိုက်ကလဲ”ငါက အစကငါးခုတ်မလို့ကွ မင်းတို့ကပိုက်တားမှာဆိုတော့ အဖော်ညီတော့ငါလဲ ပိုက်ပဲတားတော့မယ်ကွာ” ဟုဆိုကာ တန်း၌ချိတ်ထားသောပိုက်နှစ်ထည်အားယူပြီး ဓာတ်မီးအားလက်တဖက်က ကိုင်၍ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် ရွာပြင်ကွင်းအားထွက်သွားကြလေသည်။
ရွာပြင်ကွင်းသို့ရောက်သောအခါ ပိုက်တားရန် ပြင်ဆင်ကြရင်း ကိုသိုက်က “ဟေ့ကောင်တေ သိပ်ဝေးဝေးသွားမတားကြနဲ့နော်”
“အေးပါကွမင်းကလဲကြောက်တက်လိုက်တာလွန်ရော ယောင်္ကျားကြီးဖြစ်ပြီးတော့”ဟုအောင်ဘကပြောလိုက်ရာ ကိုသိုက်က”ဟ ဟေ့ကောင်အောင်ဘက ယောင်္ကျားမှာလဲ ကြောက်တက်တဲ့ အသည်းနှလုံးပါတယ်ကွ မင်းသိလား”ဟုပြောလိုက်ရာ စိုးကြီးက ” ကိုသိုက်ရာ ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့ကဗျာဆန်နေပြန်ပါပြီ”
သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ပိုက်တာရင်း ပွဲကြနေလေတော့သည် ။
ကိုသိုက်တို့သူငယ်ချင်းသုံးရောက် လဲပိုက်တားပြီး၍ တာပေါ်ပြန်တက်လာရင်း စိုးကြီးက “တို့မပြန်ပဲပိုက်တေတခါထဲပြန်ရုတ်သွားမယ်သက်လား ဟေ့ကောင်တေ”
ဟုပြောရင်းတာပေါ်ကပေါက်နေတဲ့မြက်တေကိုဆွဲနှုတ်ပြီး ထိုင်စရာ လုပ်လိုက်ကြလေသည် မိုးဦးကျကာလဖြစ်၍ တာပေါ်၌ စိုစွတ်နေခြင်းကြောင့်ပေ
ဖြစ်ချင်တော့ ကိုသိုက်မျက်နှာမူပြီ ထိုင်နေတာက သချိ င်္ုင်းကုန်းဘက် မိုးဦးကျဆိုပင်မဲ့ကောင်းကင်က တိမ်ကသိပ်မရှိ ကြယ်တောင် ပွင့်နေသည်။
အောင်ဘနှင့်စိုးကြီးကတော့ ငါးရရင် ဘယ်လိုချက်စားမယ် ပိုရင်သုံးဖို့ ရောင်းမယ်နှင့်ပြောပြီး ပီတိတေဖြစ်နေကြသည်။
ကိုသိုက်ကတော့ အောင်ဘနှင့်စိုးကြီးကို မှီနေရင်း သချိ င်္ုင်းကုန်းဘက်ကိုငေးနေမိ၏ စိတ်ထဲ၌လဲ
! သချိ င်္ုင်းကုန်းထဲက ကုက္ကိုပင်ကြီးကလဲ သရဲကြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေသလိုပဲကြောက်စရာကြီး!
ဟုတွေးနေမိသည် သူငယ်ချင်းတေစကားများပြောနေကြရင်းကိုသိုက်မှေးကနဲးဖြစ်သွား၍ လူကယိုင်းသွားသည် အောင်ဘနှင့်စိုးကြီးကတော့စကားပြောကောင်နေသည် စိုးကြီးက
” ဟေ့ကောင်ကိုသိုက်မှီရင်လဲကောင်းကောင်းမှီကွာ လှုပ်စိလှုပ်စိ လုပ်မနေနဲ့”
“အေးပါကွာ ငါလဲမင်းတို့ပြောတာနားထောင်ရင်းအိပ်ငိုက်သလို ဖြစ်သွားလို့ပါကွ” ဟုကိုသိုက်ကပြန်ပြောလိုက်လေသည်။
ပြောပြီး ကိုသိုက်တယောက် သချိ င်္ုင်းဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်သော အခါမှာတော့ သချိ င်္ုင်းထဲကနေမဲမဲအရာတခုကလှုပ်ရှားလာရင် သူတို့ရှိရာဘက်သို့လှမ်းလာလေသည် လှမ်းသောအရာသည် တလှမ်းလှမ်းတခါအရပ်ကရှည်လာလေသည် ကိုသိုက်ကြည့်နေရင်းမျက်လုံးတေပါပြူးကျယ်လာလေသည်
ကုိသိုက်လဲဘာမှမပြောပဲ သူဝတ်ထားသောလုံချည်အား ချွတ်ပြီးအောင်ဘနှင့် စိုးကြီးကိုလှမ်းစွတ်လိုက်လေသည် ဤသို့လုပ်လိုက်သောအခါ လုံချည်တကွင်းထဲ သုံးယောက်ဖြစ်သွားလေသည် အောင်ဘက
“ဘာလုပ်လဲမမေးနဲ့ ဟိုမှာ မင်းအမေလင်လာနေတာတွေ့လား” ဟု ပြောကာသချိ င်္ုင်းဘက်သို့ လက်ညိုထိုးပြလိုက်လေသည်
“ဟာ ဟို ဟိုမှာအရပ်ကြီးအရှည်ကြီးပဲ သရဲ သရဲ ပြေး ပြေးးးးး”
ဟုပြောကာ ထပြေးလေသည် ကိုသိုက်စွတ်ထားသော ပုဆိုးကိုမဖယ်အား ကြောက်လန့်၍ ထပြေးရာ
“”သ သရဲ အားးးးး ကယ်ကယ်ကြပါအုံးဗျို့””
ဟုအော်ရင်း ပုဆိုးတကွင်းထဲလူသုံးယောက် ကိုယ်မျက်နှာမူတဲ့ဘက်ကိုယ်ပြေးနေရာ ရှေ့သို့မရောက်ပဲ အဲ့နားမှာပင် ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝေဝေဖြစ်နေတော့သည်
မဲမဲရရှည်ရှည်အကောင်ကြီးအနားရောက်အလာနှင့်မဲမဲကောင်ကြီးကငုတ်အကြည့် ကိုသိုက်ကလဲမော့အကြည့်နှင့် မျက်နှာတခုလုံးမီးလောင်ထာသောမီးလောင်ကွက်တေနှင့် မျက်လုံးဟောင်းလောင်နဲ့တွေ့လိုက်သောအခါမှာတော့
အော်ရင်း ပုဆိုးကွင်းထဲ၌သတိလစ်သွားလေတော့သည် ။
အောင်ဘက စိုးကြီးကို လက်ဖမ်းဆွဲရင်း
” ……သားရဲ့ ဘယ်ဘက်ပြေးနေတာလဲ”
“ဟာ အောင် အောင်ဘ ကို ကို ကိုသိုက်ကျန်ခဲ့ပြီ ”
ဟုပြောကာ နှစ်ယောက်သာ နောက်သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ……….
သူတို့နှစ်ယောက်ကို စွတ်ထားသောပုဆိုးကွင်းထဲမှာပဲ မျက်လုံးအပြူးသားနှင့်သတိလစ်နေသော ကိုသိုက်အားတွေ့လိုက်ရလေတော့သည်…….
writer- Pyae Sone
ယမင်းရွှေဇင်က သူ့ချစ်သူလေ သူသတ်ပါ့မလား”””
အိမ်ကြီး၏အခြေအနေ အားကြည့်၍ ထိုအိမ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို
စပ်နေတဲ့မျက်လုံးကိုအမြန်ပွတ်, ပြီး ပြန်
တော့မျက်နှာကလဲဖြူ ဖတ်ဖြူ လျော်နဲ့
“ဘာ,,,,,,! နင်,နင် တကယ်ပြောနေတာ
“အောင်မယ်အချိန်လည်းကြည့်အုံး နေမြင့်နေပီ, တော်
အပေါ်တာဝန်ကျေပါတယ်ဟာ, မျက်နှာသစ်ပီးပီ ငါ
“ဟွန်း ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မနက်စာမစားဘဲ အလုပ်သွားပြန်ပီ”
ခက်ပ ဘာလိုလိုနဲ့ မော်လမြိုင်မှာတာဝန်ကျတာတောင်
နည်းအမျိူးမျိူးနဲ့ဖယ်ကြည့်သေးရာ ဖယ်မရသဖြင့် ဒီတိုင်း
“ဟီး ဟုတ်ပဦးကြီး သောက်သွားပါအုံးလား”
“တော်ပါပီကွာ အသက်ကြီးမှမမိုက်ချင်တော့ဘူး မင်းလည်း
ရွယ်ရွယ်နဲ့လစ်နေအုံးမယ် သွားပီဟေ့” ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ,
“ဟိတ် ဘယ်သူလဲကွ အိမ်အတူတူပြန်ရအောင်”
“ပြန်စရာမလိုပါဘူး ဒါ ငါအိမ်ဘဲလေကွ,ငါက လူမဟုတ်ဘူး”
“ကျူ ပ်က မကြောက်တတ်ဘူးဗျ ကဲအိမ်ပြန်လိုက်အုံးမယ်”
“နေပါအုံးကွာ မင်းကိုငါခင်တယ် အရက်လေးတိုက်စမ်းမှ”
အရက်တိုက်ရာ ချက်ချင်းငယ်ပေါင်းကြီးဖော်လို ရင်းနှီး
“စိတ်ချပါဗျာ နေ့တိုင်းအရက်ယူလာပေးမယ် တူတူ
“ကျူ ပ်ကိုပြောတဲ့လူတွေများနေပီ ရှင်ကျောက်တုံးနားမှာ
သူမိန်းမကမယုံဘဲ အရက်ကြောင်ပါပီဆိုပီး ပွစိပွစိ
ရှိတယ်မြင်နေတာထင်တယ် ” ဟာားး ဟားး ဟားးး,
“ဟာ ဒါ ဒါ ရွှေမန်ကျည်းသီးတောင့်ပါလား”
“ယုံပီမလား အယ်ဒါကျောက်တုံးကြီးက ငါမိတ်ဆွေပေးတာ”
မနှင်းမြ လောဘသံဖြင့် ,
“ယုံပါပီ ကိုကျော်စွာရယ် ရှင်ကို အရက်ကြောင်နေတယ်
ရအုံးမှာလား ဟင်” ဟာ အယ်ဒါကတော့,
ကျူ ပ်မှာတော်နဲ့ဒီကို လိုက်လာပီးကတည်းက,
ရတုန်းကျူ ပ်တို့ချမ်းသာလာအောင် များများတောင်းခဲ့”
“အေးပါ ငါရအောင်တောင်းကြည့်ပါမယ် ထပ်မပြောပါနဲ့”
“ပြောရမယ် ကျူ ပ်တို့သားလေးနောင်ရေးအတွက်”
မိန်းမကို ဆက်မပြောနေဘဲ စိတ်ညစ်စွာနဲ့ဝင်အိပ်လိုက်တယ်။
လန့်သွားတယ်, ရှင် အိမ်ထဲကိုဘယ်လိုဝင်လာတာလဲ,
“အလကားတော့မရဘူး ကျူ ပ်တောင်းဆိုတာလုပ်ပေးရမယ်”
ဝမ်းသာအားရဖြင့် “ကြိုက်တာတောင်းဆိုပါ ရှင်”
“ကိုကျော်စွာကို ကျူ ပ်စီမှာဘဲနေခိုင်းချင်တယ်”
“အို ရပါတယ်ရှင် ခေါ်ထားပါကျမကျေနပ်ပါတယ်”
ကဲ အာဆိုကျူ ပ်ပြန်ပီ, မနှင်းမြမှာ အပျော်လွန်ပီးကျန်
စီမှာအိပ်တာနေမှာပေါ့, “နှင်းမြရေ နှင်းမြ”
” ရှင်” မနှင်းမြဟိုလူပြောသွားတဲ့ စကားကိုပြန်ကြား
ဖတ်ပီးအိပ်နေရာ, “နှင်းမြ မင်းသိပ်ရက်စက်တယ်”
မနှင်းမြလန့်နိုးလာပီး ကိုကျော်စွာ ရှင်ပြန်လာတာလား,
“ကျမတောင်းပန်ပါတယ် ကိုကျော်စွာရယ် ကျမအမှားပါ”
လာကြည့်တာ မင်းကိုအရမ်းမုန်းတယ် ငါသွားပီ”
written by, ဇူးဇူး ငယ် (ဆူးငှက်) 21.7.2016
ရေတစ်ခါချိူးဖို့လည်း မနည်းပြောရတာ”
“အမေနော်, အန်တီတို့အလည်လာတာကို သမီး
“အေးကြပ်ကြပ်အလိုလိုက်ကြ၊သူနဲ့ပေါင်းတဲ့ နှင်းရီလေးများ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ချစ်ရာလေး……”
အမေရဲ့ကြိမ်းမောင်းသံတွေနဲ့ဘဲ ကျမ ဘွဲ့တောင်ရခဲ့ပီ။
အရင်လိုဖြစ်သလိုနေတဲ့ ကောင်မလေး ဟုတ်တော့ဘူး၊
“ငါ ယောက်ကျားနဲ့သွားတွေ့မလို့လေ မအားဘူး……”
“ဘာ အပျိူ လေးမတိုင်ဘဲ ဘာယောက်ကျားလဲ………”
“ဟာ နင်ကလည်း ငါကိုကိုကိုယ့် ချစ်လွန်းလို့ခေါ်တာလေ…”
“ငါ လည်း ခတ်လူငယ်ပါ တစ်ခါတစ်လေချစ်စနိုးနဲ့
ကိုကိုလောက် ငါအပေါ် ဘယ်သူမှမကောင်းဘူး၊
“ကျမအထင်တော့ အယ်ကောင်မလေး ဗိုက်ကြီးနေတာလား
“အမ ကျမပြန်လိုက်ပါအုံးမယ် …………”
“သမီးရယ် မျက်နှာပူလိုက်တာအေ ညည်း
အမေဘာမှမပြောနိုင်ခင် အိပ်ခန်းထဲ ဝင်လာလိုက်တယ်။
” နှင်းရီရေ နှင်းရီ ” နှင်းရီတော်တော် ပိန်သွားတာဘဲ။
“အော် ယမင်းလာလေဟာအပြင်မှာထိုင်ပီး စကား
ပြောရအောင် ငါ အမေရွာပြန်မလို့…………”
ကျမ ငိုပီး, “နင်က ဘာလို့ပြန်မှာလဲဟာ”
” ဘာ” မိုက်လှချည်လားသူငယ်ချင်းရယ်,
“ငါ ကောင်လေးကလည်း ဘယ်သူနဲ့ရမှန်းမသိတဲ့
“တောက် မိုက်ရိုင်းလိုက်တာဟာ ………”
မွေးမလို့ ငါကလေးအတွက်အရာရာ ရင်ဆိုင်မယ်……”
“နင်ကလေးကို မွေးရဲတာငါချီးကျူးပါတယ်ဟာ………”
” ဟာ” ကိုစီကဖုန်းလာနေပါလား,
“အဆင်ပြေတယ်ချစ် ကို သယ်ရင်းကတောင်ပြောတယ်၊
ဟာကိုကလည်း ဘယ်ကမိန်းမနဲ့ကလေးလဲ သဲဖြင့်
” အာဆို ကိုသယ်ရင်းအမြင်မှားတာ နေမှာပါချစ်……”
ကို ဖြင့်စကားပြောပီး အိပ်ချင်လာ၍ ဖုန်းချလိုက်လေတယ်။
လမ်းတစ်လျှောက်လုံး မှောင်မဲနေလေတယ်၊ယမင်း သူ
ရောက်နေတာ မြို့ မဟုတ် ရွာဖြစ်ပုံရသည်။
“ဟာ အုတ်ဂူတွေဖွေးနေပါလာ အမေ ကယ်တော်မူပါ…”
ကလေးငိုသံ “အူဝဲ အူဝဲ အူဝဲ အူဝဲ”
သချိူ င်း၌အဘယ်ကြောင့် ကလေးငိုသံဆူညံနေရတာလဲ။
တုန်နေတယ်။ ” ယမင်းရေ ယမင်း ယမင်း ”
ဒါ နှင်းရီအသံ, ဆနွင်းအနံ့များမွှန်ထူလာပီး၊အုတ်ဂူကို
“ဘယ်သူလဲ ငါကိုမခြောက်နဲ့နော် ငါကြောက်တယ်”
ထိုမိန်းမသည်ငိုပီး, ” ငါပါ ယမင်းရယ်နှင်းရီပါ ”
” နင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ငါကိုကြည့်ပါအုံး”
ကျမဘက် လှည့်လာသော်အခါ, “အောင်မယ်လေး”
” တောင်းပန်ပါတယ် ငါ ပင်ကိုယ်ရုပ်ပြမိတယ်”
” ဟာ နင်တတယ်ဘဲ နှင်းရီဘဲ ခုနနင်ရုပ်ကြီးက
” ငါ ရွာရောက်လာပီး မွေးခါနီးတော့ သူလိုက်လာတယ်။
လူယုတ်မာက ရွာကလူတစ်ယောက်ကို အပီပေါင်းပီး၊
ရွာတံတားပေါ်မှာ သူနဲ့တွေ့တာ လူကလည်းရှင်းနေတယ်။
“အား ကျမဗိုက်နာလှပီ ကျမကိုကယ်ပါအိမ်ပြန်ပို့ပါ……”
ကောက်ကျစ်စွာပြုံးပီး, “မင်းပါးစပ်ပိတ် ဒီမိန်းမ
” လာ မတောင်းပန်နဲ့ မင်းကိုတာဝန်မယူဘူးပြော
ကတည်းက ဖျက်ချပစ်ရမှာ ခုရော့သွားတော့”့
ကယ်တင်ပီး အိမ်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် ကလေးအပြင်ရောက်တာနဲ့
ငါရောသားလေးရော အသတ်မရှိတော့ဘူး ………”
ကျမသူငယ်ချင်းရဲ့ အဖြစ်ဆိုးကိုကြားပီး အသည်းအသန်
“ဟို လူယုတ်မာတွေကို သတ်မယ်၊ခုဘယ်မှာလဲ”
“ငါသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကို မြို့ အပြန်မှာကားကို
“အေးပါ နင်ဘဝဆက်တိုင်းဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိူး
နှင်းရီပြုံးပြပီး, လိပ်ပြာနှစ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲ
ကျမအနား၌ ခဏတာဝဲပီး ပျံသန်းသွားလေတယ်။
နေမှာ၊မျက်နှာသစ် ဘုရားရှိခိုးပီးမှာ အမေဈေးက
ဇူးဇူး ငယ် (ဆူးငှက်)